ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေမသာ - ငါတို့သည်7လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့များထဲမှတစ်ဦးအဆင်ပြေနေရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူဇော်မိသားစုများနှင့်အုပ်စုများ ဂန္ထဝင်ကြော့ Sedan ပေါ်မှာ။
အထူးသဖြင့်နွေရာသီလများတွင်ဘေဆယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုခငျြသူမြားစှာခရီးသွားများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်, ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမနီမှာပတျဝနျးကငျြမြို့ကြီးများကိုဆွဲဆောင်။ ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တည်နေရာ, ငါတို့သည်သင်တို့တတ်နိုင်သမျှအဆင်ပြေတဲ့မြို့ခရီးစဉ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဖောက်သည်အများစုကပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့စီးပွားရေးပေါင်းစပ်နှင့်အကောင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အများပြည်သူလူအစုအဝေးရွာမှတစ်ဆင့်နှင့်မြင်ကွင်းများ, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအကြံပေးချက်များသာဝေးအစောင့်အကြပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိကားမောင်းသမားပါစေရန်အခွင့်အလမ်းကိုအသုံးပြုလို အောင်ပြသပါ။
ဥရောပ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာအများဆုံးအဆင်ပြေမြို့ခရီးစဉ်များအတွက် Limousine service ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားမောင်းသမား မသာသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာမှဥာဏ်ပညာနှင့်လုံခြုံ, အဆင်ပြေ, ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်ပေါ်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ဘေဆယ်ကနေသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကို၏မြို့တော်သို့သှားရာလမျးပျေါတှငျအမြိုးမြိုးရှုခင်းဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ sedan ကားများကဇူးရစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ
ကြက်ဥ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျာမန် Sedan တငြိမ့်သုံးဖြုန်းဖို့ဇူးရစ်ဖို့ဘေဆယ်ထံမှ neinhalb နာရီ drive တခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအဟောင်းရောမမြို့နှင့်ခေတ်သစ်ဗိသုကာဥရောပရိပ်သာလမ်းနှင့်ဇူးရစ်အတွက်အမျိုးသားပြတိုက်တစ်ခုရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်ထဲမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းစုဆောင်းမှုအတွက်အလယ်ခေတ်လမ်းကြားမှတပါးပေးထားပါတယ်။ အနည်းဆုံးလုံးဝမမေ့နိုင်သောနှင့်မဟုတ်ဘဲ, တိုင်းဧည့်သည်များအတွက်Fraumünsterဇူးရစ်အတွက်ကမ္ဘာကျော် Chagall စွန်းဖန်ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျတခုကျယ်ပြန့်စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဇူးရစ်ဖို့သင့်အားလပ်ရက်ပေါင်းစပ်ဖို့လိုသလား? A ကောင်းဆုံးစိတ်ကူး! ဇူးရစ်ထိပ်ဒီဇိုင်နာများ၎င်း၏သီးသန့်အထူးစပါယ်ရှယ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဧည့်သည်များ, အထူးဆိုင်များနှင့်စတိုးဆိုင်များနှင့်အတူရေပန်းစားသည်။ ဤတွင်အိမ်မှာခရစ္က de Carouge, အထည်အလိပ် Frontline, Hanns ခနှင့်Könixပါဝင်သည်နှင့်သာမန်ထက်အဝတ်အစား၏ဒီဇိုင်း, အတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်အပေါ်ဖိနပ်နှင့်အတူစောင့်ပါ။ ဇူးရစ်မြို့ရှိဆွစ်ကာစီနိုဂိမ်းများနှင့်ပြိုင်ပွဲအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလာမယ့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ရပ်များအံ့အားသင့်။ ထိုအကြီးများနှင့်သေးငယ်တဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေအဘို့အနာမည်ကျော်ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲပြတိုက်သို့ဇူးရစ်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့။
limousine အတွက် Mulhouse Ville ဖို့စီးတီးခရီးစဉ်
ပြင်သစ် Mulhouse - ဘေဆယ်ထံမှသာနာရီဝက်ရဲ့ drive ကို - ဘေဆယ်နှင့် Freiburg နှင့်အတူရှယ်ယာယူရိုလေဆိပ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဖောက်သည်များ၏အတော်များများမှန်မှန် Alsace အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်နေရာ Mulhouse Ville အပေါ်ဘေဆယ်လေဆိပ်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ နယ်စပ်တြိဂံအတွင်းမြို့ 18 အတွက်အထူးသဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်။ အကြီးအအရေးပါမှု၎င်း၏အထည်အလိပ်စက်ရုံတွေနဲ့အတူပြင်သစ်စက်မှုတော်လှန်ရေး၏ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ရာစု။ 10.000 ကျော်ဝန်ထမ်းနှင့်အတူ Peugeot Alsace တွင်အကြီးဆုံးအလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ Mulhouse Ville, သမိုင်းဆိုင်ရာစက်မှုဇုန်အထိမ်းအမှတနှင့်အလယ်ခေတ်အသင်းတော်များနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးသင်အမိန့်၏ Alternative တစ်ခုအဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးနှင့်အတူလောင်စာဆီဖိအား-ပြတိုက်နှင့်ကျော်ကြားသောအမျိုးသားပြတိုက်ကိုးကား de l'Automobile အံ့အားသင့်။
ဆွစ်ဇာလန်, ဂျာမနီနှင့်ပြင်သစ်တွင်မြို့ကြီးများအပြင်ကျနော်တို့အခြားမြို့များတွင်လည်းသဘာဝသငျသညျကိုမောင်း။ ရွေးချယ်ထားသည့်ပစ်မှတ်၏တစ်ဦးကဈေးနှုန်းစာရင်းသင်သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေဆိပ်လွှဲပြောင်းများအတွက်စျေးနှုန်းများကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ရန်မျှော်လင့် အွန်လိုင်းဘွတ်ကင် သို့မဟုတ် + 41 78 861 35 50 မှာသင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုခ။
မှတ်သား: လေဆိပ်လွန်း ဘေဆယ် လေဆိပ်ကြိုပို့ Limousine service ကို မြို့လပ်ချိန်
taxi.flughafen ဧပြီလ 6, 2017 ဧပြီလ 6, 2017 Uncategorized မှတ်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမ
← BASELWORLD 2018 - လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှုဘေဆယ်နှင့်အတူအဆင်ပြေခရီးသွား